Barikadimy – Toamasina: miketrika fitokonana ny mpianatra | NewsMada
Barikadimy – Toamasina: miketrika fitokonana ny mpianatra
Lafo ny hofan-trano, ratsy fandraisana ny mpianatra raha mba te hihaona amin’ny filoha, miavonavona ireo misahana ny asa manodidina ny filohan’ny oniversiten’i Barikadimy- Toamasina… Anton’ny fitarainan’ny mpianatra sasantsasany nitafa tamin’ny mpanao gazety tamin’ity herinandro ity ireo, tetsy Mangarano.
Nambaran’ireo mpianatra fa tsy zakan’izy ireo ny hofan-trano 120 000 Ar ka tsy ho ela, mety ho fitokonana no entina hitakiana ny hampihenana izany raha tsy mety handray andraikitra manoloana ny fahasahiranana ny eo anivon’ny fiadidian’ny oniversite.
Mampitaraina ny mpianatra koa ny avonavona sy ny fanilihana ary ny fanavahana olona ataon’ireo tompon’andraikitra sasany ao amin’ity oniversite ity. Raha misy fangatahana fihaonana ataon’ny mpianatra amin’ny filoha, anisan’ny voailika tsy nahazo fangataham-pihaonana hanamarina ny loharanom-baovao koa ny mpanao gazety fa voasakana.
Ankatok’izao fanomanana ny fanadinam-panjakana izao, niova tanteraka ny zava-misy. Voarara fa tsy afaka hanome vaovao ny mpanao gazety ihany koa ireo tompon’andraikitra misahana ny fanadinana bakalorea raha tsy mahazo alalana manokana avy amin’ny filohan’ny oniversite.